Ozbekistan: Fiampangana Heloka Bevava An’i Umida Akhmedova Mpaka Sary Fanadihadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Marsa 2018 13:53 GMT
Vakio amin'ny teny русский, polski, Español, English
Voampanga ho nanevateva sy nanendrikendrika ny vahoaka sy ny fomban-drazana Ozbeka i Umida Akhmedova, mpaka sary fanadihadiana Ozbeka, araka ny tatitry ny Fergana.ru [EN]. Ny sazy ambony indrindra ho an'ireo fiampangana ireo dia ahitana asa fanarenana mandritra ny roa hatramin'ny telo taona na fanagadrana mandritra ny enim-bolana.
Araka ny voalazan'i Umida Akhmedova, nilaza taminy ny kapiteny Nodir Akhmadzhanov, mpanadihady ao amin'ny sampan'ny polisy ao an-tanànan'i Tashkent [EN], fa ireo mpanoratra rehetra eo an-toerana izay niara-niasa tamin'ny Fandaharan'asan'ny Masoivoho Soisa momba ny Vehivavy no niantefan'ny fitoriana heloka bevava. Voampanga tamin'ny famoahana ny raki-tsary “Vehivavy sy Lehilahy: manomboka mangiran-dratsy ka hatramin'ny masoandro mody”, novokarina tamin'ny taona 2007 teo ambany fanohanan'ny Fandaharan'asan'ny Masoivoho Soisa momba ny Vehivavy i Akhmedova, araka ny nosoratan'ny Fergana.ru. Tsy misy ny fanazavana momba ireo mpanoratra hafa izay nametrahana ny fitoriana. Manohy manazava ny tranonkala:
Nilaza i Omida Akhmedova fa sambany izy no nantsoin'ny polisy tamin'ny 17 Novambra. Nanasa azy tao amin'ny Mirabad RDIA ny kapiteny Nodir Akhmadzhanov mba hanome tatitra vavolombelona mikasika ny raki-tsariny “Vehivavy sy lehilahy: mangiran-dratsy ka hatramin'ny masoandro mody”. Nanadihady an'i Umida nandritra ny adiny roa ny mpanadihady ary nametraka fanontaniana, mifandraika amin'ny fandraisana anjaran'i Akhmedova tamin'ny famokarana ny raki-tsary sy ny horonantsary toy ny “lehilahy sy vehivavy: fombam-pivavahana sy fombafomba” ary ny “ny enta-mavesatry virijiny” ( Azo trohana ato ny Torrent).
Naneho hevitra tamin'ny famoahana fanangonan-tsonia ho fiarovana an'i Akhmedova ny Fiarahamonina Iraisam-pirenen'ireo mpaka sary sy mpanakanto. Tao amin'ny taratasy fanangonan-tsonia iray, naneho fanatafintohinana faratampony tamin'ny fiampangana ny taratasy “Fanoherana sy Fahatezerana” an'ny Fikambanana Iraisampirenen'ny Mpanao Gazety ao “Kaokazia” .
Nilaza ilay mpisera Lj vaskodagala fa tena afaka manampy olona ny fanentanana fiarovana toy izao ary mangataka amin'ny rehetra izy mba hanasonia ny fangatahana. Fanentanana hamoahana an'i Umida Niyazova any am-ponja sy ivelan'ny firenena no fanentanana farany (Azo jerena ato ny fitantarana momba ny fanentanana). Nanambara i Vaskodagala fa mahafantatra manokana an'i Akhmedova izy ary tsy mety mino fa miharatsy tahaka izany ny toe-javatra:
Ny fanangonan-tsonia dia azo soniavana ato.
Maro ireo sary mbola azo jerena ao amin'ny Fergana.ru [RU]
Mombamomba an'i Umida Akhmedova (araka ny voalazan'ny UZSCI)
Teraka tamin'ny 21.10.1955 tao Parkent [RU], Ozbekistan
1981 – 1986 – Nianatra tao amin'ny Oniversitem-panjakana Rosiana Rehetra momba ny sinema sy sary, Moskoa, Rosia